Wholesale China Custom SLA SLS Resin 3D Printing Prototype Parts Service Manufacturer and Supplier |Senze
Ny teknolojia dia misy fampiharana amin'ny firavaka, kiraro, famolavolana indostrialy, maritrano, injeniera ary fanorenana (AEC), fiara, fiaramanidina, indostrian'ny nify sy fitsaboana, fanabeazana, rafitra fampahalalana ara-jeografika, injeniera sivily, ary sehatra hafa.
Mafana fanodinkodinana hafanana
Min hatevin'ny rindrina
Savaivony lavaka min
Tokony ho 3 andro
Toy ny rakitra 3D
Inona no atao hoe SLA 3D printing
Ny fanontam-pirinty 3D Stereolithography (SLA) dia nanjary nalaza be noho ny fahaizany mamokatra prototypes avo lenta, isotropika ary tsy misy rano ary ampahany amin'ny fitaovana mandroso miaraka amin'ny endri-javatra tsara sy ny endriny malefaka.
Ao amin'ity torolalana feno ity, ianaro ny fomba fiasan'ny teknolojia fanontana SLA, nahoana ny matihanina an'arivony no mampiasa an'io dingana io ankehitriny, ary inona no tokony ho fantatrao hijerena ny fomba ahafahan'ity dingana fanontam-pirinty 3D ity mahasoa ny asanao.
Ny ampahany amin'ny SLA dia manana ny famahana sy ny fahitsiana avo indrindra, ny antsipirian'ny maranitra, ary ny famenoana ambony indrindra amin'ny teknolojia fanontana 3D rehetra, fa ny tombony lehibe indrindra amin'ny stereolithography dia ny fahaizany.
Ny mpanamboatra akora dia namorona famolavolana resin SLA vaovao miaraka amin'ny karazana optika, mekanika ary thermal mba hifanaraka amin'ny thermoplastika mahazatra, injeniera ary indostrialy.
fampiharana amin'ny fanontana 3d
Ny teknolojia dia manana fampiharana amin'ny firavaka, kiraro, famolavolana indostrialy, maritrano, injeniera ary fanorenana (AEC), fiara, aerospace, nify ary fitsaboana.
indostria, fanabeazana, rafitra fampahalalana ara-jeografika, injeniera sivily, ary sehatra hafa.
ny tombony amin'ny fanontana 3d
1. Ny fanontana 3D Custom dia marina amin'ny CAD.
2. Ny fanontam-pirinty 3D an-tserasera dia manome prototyping haingana haingana 1-2 andro.
3. Ny SLA sy ny SLS dia manome vokatra tsara.
4. Prototypes matanjaka sy haingana ary ampahany amin'ny fampiasana farany.
5. Jeometria sarotra azo atao amin'ny fanontana 3D.
6.Small MOQ dia mamonjy vola bebe kokoa.
Fitaovana fototra ho an'ny fanontana 3D
Photosensitive resin, Nylon, labozia mena, Flexible lakaoly, Aluminum firaka, Stainless vy ...
Atrikasa fanontana 3D
Resin 3D fanontana no soso-kevitra ho an'ny
1. Modely misy pitsopitsony saro-pady na faran'ny ety ivelany
2. Mamorona lasitra ho an'ny fanariana mba hanamora ny famokarana faobe
3. Manamboatra prototypes kely maromaro ao anatin'ny fotoam-panontana iray
4. Fanontam-pirinty 3D amin'ny endrika organika sarotra
5. Ny ampahany vita pirinty 3D novolavolaina amin'ny sehatra isan-karazany amin'ny injeniera mazava tsara
teo aloha: Spider Prototype 5 Axis Machining CNC Precision Custom Parts
Manaraka: China Custom mivadika volamena tsara Plating CNC varahina Machining Parts
Ampahany vita pirinty 3d
Fiara fiara fanontana 3d
Serivisy fanontana 3d Rapid Prototype
Parts fanontana 3d Fdm
Fanontam-pirinty 3d Prototyping haingana
Resin 3D Fanontam-pirinty Parts
Ampahany fanontana 3d Sls
Resin 3D trano fanontam-pirinty prototype
Fanontam-pirinty 3D Black Nylon 3D amin'ny hafanana avo ...
Fizarana milina vy Kojakojan'ny milina môtô Fizarana Masinina Lathing Custom Robot Machining Parts Precis Machining Part Parts machining anodized